न्यूसाउथवेल्सको एक उलवर्थमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि ५० जना आईसोलेसनमा ! « MNTVONLINE.COM
न्यूसाउथवेल्सको एक उलवर्थमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि ५० जना आईसोलेसनमा !
न्यूसाउथवेल्सको बाल्मेनस्थित एक उलवर्थ स्टोरमा कार्यरत व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उक्त स्टोरमा काम गर्ने ५० जनालाई सेल्फ आईसोलेसनमा बस्न भनिएको छ भने बुधबार उक्त स्टोर पूरै सफा गरिएको छ । मेलबर्नबाट फर्किएका उक्त कामदार मेलबर्नको होटलमा क्वारेन्टाईनमा बसेका थिए । कोरोना लागेर निको भएपछि उनलाई सिड्नी जान दिइएको थियो । तर, उलवर्थका मेनेजरले उनमा केही लक्षणहरु देखिएप्छि तत्कालै परीक्षण गर्न लगाएका थिए । उक्त परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ नै देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय मेलबर्नको होटल क्वारेन्टाईनहरुमा व्यापक लापर्वाही भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला यो अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ । सञ्चारमाध्यममा होटलको क्वारेन्टाईनमा खटाइएका निजी सुरक्षाकर्मीहरु तािलमविना काममा आएको, कामको बेलामा सुतेको र क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरुसँग यौन सम्बन्ध समेत राखेको घटनाहरुले धेरैलाई झस्काइदिएको छ ।
कोरोना देखिएका कर्मचारी सेल्फसर्भ काउन्टरमा काम गर्दथे । उनी मेलबर्नबाट सिड्नी आउने बेला मास्क लगाएर आएका थिए यद्यपि विमानमा उनीसँगै यात्रा गर्नेहरुको अवस्थाका विषयमा छानविन भइरहेको छ । भिक्टोरियाका ३६ रेडजोन सबअर्बबाट आउने व्यक्तिहरुलाई न्यूसाउथवेल्स प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि जबर्जस्ती प्रवेश गरेको पाइएमा ११ हजार डलर वा ६ महिना जेलको सजाय वा दुवै सजाय हुनेछ ।